Doono Ciise 2036? | Apg29
Laakiin haddii Ciise runtii soo laabtay ee 2036 sidaa daraadeed waxa uu leeyahay in rayrayn Baybal dhici 2029th
Anders Gärdeborn leh uu buugga "Mästerdirigentens shaqo".
Rayrayn Baybal qaadataa meel toddoba sannadood ka hor inta Ciise celinta. Ciise ma iman karo dib ilaa rayrayn ayaa dhacay. In 2029, waxaan ka dibna ogaato oo ku saabsan xaq u Anders Gärdeborn.
Dadka iyo iimaanka
Anders Gärdeborn , taas oo, kadis ah, waa mid aad u tayo iyo aqoon u leh, iyo cidda qortay buugga " Mästerdirigentens shaqeeya " bandhigaysaa xisaab ah in Ciise soo noqon doonaan 2036th sano
Haddii aan karo, iyo waxyaabo kale, dhagaysto Radio P1 ee " Dadka iyo iimaanka ". Waxa uu helay buuxda 16 daqiiqo heli karaa barnaamijka in ay soo bandhigaan uu sha.
Sidee xisaabinta tegey inuu soo
Si aad u hesho qarnigii, uu ka samayso Kitaabka Quduuska ah is tusay in Ciise waxa uu ku soo laabtay 5999 sano ka dib abuurka. Si aad u tiro in dacweyn kartaa, Anigu waxaan haystaa diidmo lahayn in ay, laakiin markaas waa in isaga lagu wareejiyo tirada kaalendarka Gregorian inay soo qaadaan in 2036, oo halkan waxaan ula jeedaa in ay noqon kartaa qalad ah.
kaalendarka Gregorian in aan u isticmaalno ma aha had iyo jeer lagu kalsoonaan karo. Waxaa la og yahay in ay ka buuxay on dhowr sano Goortii Ciise ku dhashay. Laakiin ma waxaa iga yaabin lahaa in Ciise run ahaantii yimaado dib ku dhawaad 2036th
Laakiin haddii Ciise runtii soo laabtay ee 2036 sidaa daraadeed waxa uu leeyahay in rayrayn kitaabiga ah ka dhaco 2029. Rayrayn Baybal qaadataa meel toddoba sannadood ka hor inta Ciise celinta. Ciise ma iman karo dib ilaa rayrayn ayaa dhacay. In 2029, waxaan ka dibna ogaato oo ku saabsan xaq u Anders Gärdeborn.
Laakiin waa inaan tilmaan hal shay: Anders Gärdeborn ayaa rayrayn xisaabaha uu muujinaysa in aysan waxaa laga yaabaa run oo dhan. Gärdeborn aadan haysan aragtida classic of rayrayn ah in aan arko ee Kitaabka Quduuska ah. Haddii aad si taxaddar leh si ay u xisaabiso taariikhiyan Bible iyo waqti, markaa waa in aad sidoo kale hubi in ay keenaan waxyaalahan oo dhan in Kitaabka Quduuska ah barayaa, oo aan ka tegid wax.
Waa hubaal waa in la oggol yahay in Anders Gärdeborn aaminsan yihiin in dhibaatadii weynayd bilaabmaa 2029, toddoba sannadood ka hor inta Ciise celinta. Halkanna wuxuu xaq u leeyahay in dhibaatadii weynayd waa socon toddoba sannadood ka hor inta Ciise yimaado dib karo.
Badbaadiyey oo diyaar u ah
Laakiin in dhibaatadii weynayd awoodaan in ay soo baxaan noqon doonaa, waa in ay jiri laba wax. First aad leedahay rayrayn Mu'miniinta badbaadiyey inuu ka dhaco, ka dibna waxay leeyihiin ka gees ah in ay soo baxaan. Ka gees ah ka muuqan karaa oo kaliya ka dib markii rayrayn ah ee Mu'miniinta Ciise ayaa dhacay.
Ilaa iyo inta rayrayn ayaa dhacay, ka gees ah uusan hore u ma iman. Ka gees ah weeraryahanka ma iman karo maanta, sababtoo ah rayrayn ayaa weli dhicin. Laakiin waxaa iman, wuxuu ahaa awoodaan in ay soo baxaan 2029? Ama rayrayn hor dhici doona?
Waxa fiican in aynu hore u heshay Ciise si nahay inaynu ku badbaadi oo diyaar u ah.